साक्षी बस्नु कति खतरनाक ? - Birgunj Sanjalसाक्षी बस्नु कति खतरनाक ? - Birgunj Sanjalसाक्षी बस्नु कति खतरनाक ? - Birgunj Sanjal
साक्षी बस्नु कति खतरनाक ?
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०१:४०
नयाँ दिल्ली । दिल्लीको एर्म्स अस्पतालमा भर्ती भएकी उन्नाव बलात्कार काण्डकी पिडितको हालत अझै नाजुक छ । रायबरेली नजिक भएको एक दुर्घटनामा पिडित तथा उनका वकिल गम्भीर रुपमा घाइते भएका थिए । जबकि दुईजना महिला आफन्तको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये एकजना २०१७ को घटनाको साक्षी थिइन् ।
लखनउका बीबीसी संवाददाता समीरात्मज मिश्रका अनुसार पिडित र साक्षीको सुरक्षा प्राप्त भएको थियो तर दुर्घटना भएको दिन सुरक्षाकर्मी उनको साथ थिएन । सीबीआईले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस विषयमा अभियुक्त भाजपाका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सबै आरोपलाई इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।
यो घटनालाई लिएर भारतमा एक पटक फेरि रुचीकर साक्षीको सुरक्षालाई लिएर सबैको ध्यान खिच्ने काम भइरहेको छ । चश्मदीद साक्षीलाई न्याय व्यवस्थाको आँखा र कान बताइँदै आएको छ । यद्यपि अभियुक्त प्रभावशाली छ भने भारतमा चश्मदीद साक्षी हुन सजिलो छैन ।
विश्वभर २०० भन्दा बढी आश्रम चलाउने आसाराम बापूका छोरा नारायण साइमाथि लागेको यौन उत्पीडनको मामिलामा महेन्द्र चावला एक महत्वपूर्ण साक्षी हुन् । आसाराम बापू र उनका छोरा नारायण साई बलात्कार मामिलामा जेलमा छन् । तर, सुरक्षालाई लिएर महेन्द्र चावलाको चिन्ता अझै टुंगिएको छैन ।
“आसाराम जेलमा छन् त के भयो ? उनका सैयौं समर्थकले अझै मलाई निशाना बनाउन सक्छन्,” उनी भन्छन् ।
महेन्द्र चावलाका अनुसार आसाराम बापूसँग जोडिएका कुल १० मानिसमाथि हमला भयो । तिनमा तीन जनाको मृत्यु भयो र एक व्यक्ति राहुल सचान अझै गायब छन् ।
जो मानिसमाथि हमला भयो वा जसको हत्या भयो ती सबै प्राइम विटनेसको रुपमा देखिएका मानिस हुन् । यद्यपि अहिलेसम्म आशारामलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छैन ।
महेन्द्र चावला प्रहरीको सुरक्षामा रहेको भए पनि उनीसँग सम्पर्क त्यति सजह छैन ।
उनी नचिनेको फोन नम्बर उठाउँदैनन् । यदि तपाईँले कसैको रिफरेन्सबाट उनलाई पहिला मेसेज पठाउनुभयो भने पनि त्यतिबेला तपाईंमाथि प्रश्न भरमार रुपमा उठ्नेछ । कारण उनलाई वर्षौँसम्म आएको धम्की र त्यसपछि भएका ज्यान लिने खालका हमला ।
महेन्द्र चावला दाबी गर्छन् कि १३ मे २०१५ बिहान ९ देखि साढे ९ बजेको आसपासमा जब उनी हरियाणाको पानीपत जिल्लाको सनौली खुर्द गाउँमा आफ्नो पहिलो फ्लोरवाला घरमा आराम गरिरहेका थिए उनले बाहिर कुनै आवाज सुने । बाहिर उनले दुई जनालाई देखे । उनीहरुको साथमा बन्दुक थियो । ती मध्ये एक जना सींढी चढ्दै थिए । र अर्का एक जना तल पहरेदारी गर्दै थिए ।
एक्कासी हमलावारले महेन्द्र चावलामाथि गोली चलाए । पहिलो गोली गारोमा लाग्यो र दोस्रो महेन्द्र चावलाको काँधमा लागेको थियो । हमलावार उनलाई मरेको सम्झेर छोडेर भागेको थियो । उनी ८ देखि १० दिनसम्म अस्पतालमा बसे । महेन्द्र चावलाका अनुसार हमलावरले धम्की दिएर भनेका थिए,‘‘नारायण साईको विरुद्धमा साक्षी बक्ने हो ?’’ उता आशाराम बापूका वकिल चन्द्रशेखर गुप्ता सबै आरोपको खण्डन गर्छन् । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘‘२०१३मा आशाराम बापूलाई गिरफ्तार गरिएपछि जुन मामिलालाई हमला भनिँदै आएको छ ती कुनै पनि मामिलामा आशाराम बापू अभियुक्त होइनन् । सन् २००९मा राजु चाँदकका नामको एक आश्रम साधकमाथि हमला भयो । सो मामिलामा आसाराम बापूलाई अभियुक्त बनाइएको थियो ।”
कैयौँ पटक साक्षीमाथि धम्की आदिको दबाब भइरहन्छ । यस्तो मामिलामा अभियुक्त सबूतको अभावमा छुट्ने गरेका छन् । गुजरातमा आरटीआई एक्टिभिस्ट तथा पर्यावरणविद् अमति जेठवा मामिलामा वकिल आनन्द याग्निक साक्षी थिए । याग्निकका अनुसार २० जुलाई २०१०को गुजरात हाइकोर्टको बाहिर अमित जेठवाको हत्या भन्दा एक दिन पहिला अमितले उनको चेम्बरमा आफ्नो ज्यानलाई लिएर चिन्ता जनाएका थिए ।
याग्निकका अनुसार अमित जेठवा मर्डर ट्रायलको दौरानमा १९५ मा १०५ साक्षी आफ्नो बयानबाट बाहिरिएका छन् ।
यही वर्ष जुलाईमा पूर्वसांसद दीनू सोलंकीलाई अमित जेठवाको हत्यामा दोषी ठहर गरिएको छ ।
यसपछि याग्नीकलाई सुरक्षा दिइएको छ । प्रहरीको गैरमद्धत व्यवहार र भ्रष्टाचारले पनि साक्षीको दुःख बढाइदिन्छ ।
साक्षीसँग न्याय व्यवस्थामा कस्तो व्यवहार हुन्छ यो बारेमा सन् २०१८ को आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लेखेको थियो साक्षीको साथमा न कुनै न्यायीक सुरक्षा हुन्छ न उनको साथ न्यायीक व्यवहार हुन्छ ।
आजको न्याय व्यवस्था साक्षीतिर त्यति धेरै ध्यान दिँदैन । उनीहरुको आर्थिक र अन्य निजी हालत नबुझ्दै उनीहरुलाई अदालत बोलाइने गरेको थियो ।
साथै उनीहरुलाई आउने जानेको खर्च पनि दिइँदैथ्यो । अदालतको मामिला वर्षौँ घचेडिने भएकोले साक्षीले आफ्नो बयानबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था समेत आउँछ । वा उसले साक्षी हुन नै इन्कार समेत गर्न सक्छ । वर्षौं अदालतको चक्कर काट्ने, प्रहरीको सामुन्नेमा पटक पटक यसो गर्दा साक्षीको जीवनमा गहिरो असर पर्न सक्छ ।
अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकको जस्तै भारतमा चश्मदीद साक्षीका लागि कोही आधिकारिक कार्यक्रम, कानुन छैन । यद्यपि वर्षौदेखि विभिन्न ल कमिसन वा कानुन आयोगमा यस विषयलाई लिएर कुरा भइरहेको हुन्छ ।
सन् १९७१ यता सुरक्षा कार्यक्रममा अमेरिकामा अझै ८६०० चश्मदीद साक्षी र उनका ९९०० परिवारजनलाई यो कार्यक्रमको कारण सुरक्षा, नयाँ पहिचान, नयाँ दस्ताबेज तथा मेडिकल सुविधा दिइएको छ ।
बेलायतको नेशनल क्राइम एजेन्सीले यस्तै काम अघि बढाइरहेको छ । जसमा मानिसहरुलाई बेलायतका भित्र बाहिर साक्षी सुरक्षामा मानिस दौडिरहेका हुन्छन् ।
खतरालाई हेरेर कहिलेकाहिँ बेलायत बाहिर पनि सो टोलीलाई खटाइन्छ । कतिपय साक्षीलाई खतरा यति धेरै हुन्छ कि उनीहरुलाई आफ्नो परिवार तथा साथीहरुलाई जतिबेला पनि ‘अलविदा’ भन्नु जरुरी हुन्छ । किनकि उनीहरुको रिलोकेसन वा स्थानान्तरण स्थायी हुने गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा अप्रिल १९९५मा शुरु भएको नेशनल विटनेस प्रोटेक्सन प्रोग्राम साक्षीको सुरक्षामा नै केन्द्रित रहेको छ । डिसेम्बर २०१८मा सुप्रिम कोर्टले भारतमा एक विटनेस प्रोटेक्सन स्कीमलाई हरियो झण्डा देखाएको थियो । भनिएको थियो कि जबसम्म संसद यो कानुन बनाउँदैन त्यतिबेला सम्म यो स्कीमले स्थलगत रुपमा काम गर्नेछ ।
यो स्कीम अन्तर्गत साक्षीलाई हरेक जिल्लामा बन्ने कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई निवेदन लेख्नु जरुरी हुन्छ । साक्षीमाथि खतरा कति गम्भीर हो प्रहरीले उसको जाँच गरेर त्यस आधारमा फैसला हुन्छ । विटनेश प्रोटेक्सन कार्यक्रममा साक्षीको सुरक्षाको लागि पूर्ण गोपनीयताको कुरा गरिरहेको छ ।